यो सरकारले अ’धिनायकवादी शैलीमा जनतालाई सु-सुचित गराउने बुद्धिजीवी वर्गका मुख ब’न्द गर्दैछ। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
यो सरकारले अ’धिनायकवादी शैलीमा जनतालाई सु-सुचित गराउने बुद्धिजीवी वर्गका मुख ब’न्द गर्दैछ।
प्रधानमंत्री सत्ताको खेलमा!
जनता कोरोनाको सन्त्राष संगै सरकारको पाल्तु प्रहरी प्रशासनको सन्त्राषमा छन! Hem Raj Thapa उनै हुन जसले “शिक्षा ऎनको नवौँ संसोधनको” विरुद्धमा ६ दिन आमरण अनशन बसेका थिएँ।
हेमराज थापा देशमा भैईरहेका हरेक क्षेत्रको अनियमितता Corruption विरुद्ध निरन्तर बुलन्द आवाज उठाउने क्रान्तिकारी विद्यार्थी हुन। कसैको आस्था, सिद्धान्त पार्टी फरक हुँदैमा राम्रो कामलाई नि निरुत्साहित र निषेध गर्ने नेकपा ओली सरकारको अधिनायकवादी शैली हो।
आफु अनुकुल आस्थावान अर्थात नेकपाको Ain Maharले राहत वितरण भन्दै विद्यार्थीहरुलाई सडकमा उतार्दा नत सरकार संग समन्वय केहि गर्नै पर्दैन। तर भ्रष्टाचारी विरुद्धका अभियन्ता Gyanendra Shahi र हेमराज थापाले भने सरकार संग समन्वय गर्नु पर्ने यो कस्तो ऐन हो? आफ्नोलाई चयन आफु निकटतम प्रतिद्वंदीलाई ऐन यो हामीलाई सह्यै छैन।
नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्वीयु विद्यार्थीहरुले आफ्नो Opposition लाई झुटा आरोप लगाउँदैमा सत्य मान्ने नेपाल प्रहरी प्रति घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु!
अहिले सम्म नेपालमा Rapist लाई कुनै प्रभावकारी Investigate गर्न नसक्ने नेपाल प्रहरी जहिले सत्ताको बलमा नुन खाएको सोजो हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पुर्णतः अवगत छ।
नेपाल प्रहरी प्रशासन कुनै एक सत्ता र दलको अमुक संगठन होईन भन्ने ज्ञात प्रहरी प्रशासनलाई होस्। हाम्रै करबाट अझ भन्दा प्रवासमा बस्ने झण्डै ८० लाख युवाले पठाएको Remittance बाट नेपाल प्रहरी देखी नेपाल सरकार चलाउने ‘दामरेडरुले’ खाने तलब भत्ता हाम्रै पैसा हो।
संविधानतः विधीको शासन सबैले मान्नै पर्छ! तर विधीको शासन भन्दै गर्दा जुन अहिले यो सरकारले अधिनायकवादी शैलीमा जनतालाई सु-सुचित गराउने बुद्धिजीवी वर्गका मुख बन्द गर्दैछ। सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ज्यु सत्ता जीवन्त रहन्न!
संसदीय व्यवस्थामा चुनाव फेरी हुनेछ। तपाईले आफ्नो कार्यकाल पाँच सालको लागी ठुलै अवसर पाउनु भएको थियो। सम्भवतः यो कार्यकाल सबै भन्दा ठुलो हो त्यो पनि काम गर्न सक्ने सुवर्ण अवसर थियो र छ।
नत सरकारमा रहँदा द्वन्द छ, नत राजाले काम गर्न दिएन भन्ने ठाउँ छ। यो विचमा प्रधानमंत्री ज्युले Opportunity के पाए भन्दा कोरोनाको सन्त्राषमा “लक डाउन” गरे अनि नागरिक सडकमा आउन पाउँदैनन् र सरकारले गरेको गलत गतिविधि प्रति निरन्तर खवरदारी गर्नेहरुलाई घर-घरमै पुगेर Arrest पुर्जी जारी गर्दै तत्काल पक्राऊ गर्ने!
वाह! प्रधानमंत्री ज्यु तपाई कति जनप्रिय है! मान्छे मार्ने क्रान्तिबाट आएको व्यक्तिले कहिल्यै नागरिकका पिडा कष्ट बुझ्न सक्दैन। ऊसले सक्छ त केवल आदर्शवादका कुरा गर्न।
“वसन्तका पालुवाहरु परिस्थितिका लास हुन्छन!
आदर्शका मालीकहरु व्यवहारका दास हुन्छन!!” भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्यु र उनका झोले झम्टेहरुलाई ज्ञात हुन नितान्तः आवश्यक छ।
Previous छा’पामार शैलीमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई किन प’क्राउ गरेको सरकार ? के उनी गद्दाफी हुनर?- ज्वाला संग्रौला
Next ओली प्र’वृत्तिलाई चिनौं र इतिहासबाट छिटो वि’दा गरौं- डा. बाबुराम भट्टराई